युवा स्टारको प्रेम चर्चा: अनमोल, प्रदिप, पल र आकाश संग जोडिएका यी नाम – Nepali Entertainment Site
सिने नगरीमा सर्वाधिक चासो र चर्चाको बिषयको रुपमा रहन्छ प्रेम र ब्रेकअप । आम दर्शकका लागी पनि चासोको बिषय रहन्छ सेलिब्रेटीको प्रेम र ब्रेकअपको चर्चा। आफुले मन पराएको सेलिब्रेटीको प्रेम जीवनलाई नजिकबाट नियाल्न सवैको चासो रहन्छ। पछिल्लो समय युवा पुस्तामाझ सर्वाधिक रुचाईएका र चासोका साथमा हेरिएका चार अभिनेता हुन्, अनमोल केसी, प्रदिप खड्का, पल शाह र आकाश श्रेष्ठ।
अनमोल, प्रदिप र पललाई एक अर्काको प्रतिष्पर्धीको रुपमा पनि लिईन्छ भने रामकहानी रिलिज पश्चात आकाशले आफ्नो निकै राम्रो फ्यान फलोइंग बनाएका छन्। आज हामि यो साम्रागीमा यी चार अभिनेताको प्रेम जीवनको बिषयमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौ। रमाईलो प्रसंग के छ भने मीडिया, निकट व्यक्ति र आम दर्शकले पनि हामिले चर्चा गर्न लागेका व्यक्तिहरुलाई जोडी बताइरहदा स्वयम् व्यक्तिले भने यो कुरा स्विकार गरेका छैनन्।
१. अनमोल केसी र सारा शिर्पाइली
लभर्स र हेटर्सको लगभग उस्तै कमाएका अनमोल केसी हाल ‘ए मेरो हजुर ३’ को छायाँकनमा व्यस्त रहेका छन्। उनि अभिनित ‘क्याप्टेन’ फागुनमा रिलिज हुने तयारीमा रहेको छ। पछिल्लो समय अनमोल अभिनेत्री सारा शिर्पाइली संगको प्रेम प्रसंगका कारण चर्चामा रहेका छन्। ‘रुद्र’ डेव्यु अभिनेत्री सारा अभिनित नयाँ चलचित्र ‘सुश्री सम्पति’ रिलिजको तयारीमा रहेका छन्। कम नेपाली सेलिब्रेटीलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्ने अनमोलले सारालाई फलो गरेका छन्। दुवैको नजिक रहेका केहि साथी र सिने नगरीका व्यक्ति पनि यी दुई प्रेममा रहेको बताउछन्। तर दुवैले यो कुरालाई अस्विकार गरेका छन्। अनमोलले एक अनलाईन मिडिया संग कुरा गर्दै आफुहरु इन्स्टा साथी मात्र रहेको बताएका छन्। त्यस्तै साराले रुद्रमा अनमोलको आमा सगं काम गरेका कारण उनले शुभकामना दिएको र दुवै साथी मात्र रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्।
दुवैको प्रेम छ अथवा छैन त्यो भने यी दुईलाई नै थाह होला।
२. पल शाह र आंचल शर्मा
म्युजिक भिडियो देखि चलचित्र सम्म साथ देखिएर दर्शकको राम्रो साथ पाएको जोडी हो , पल शाह र आंचल शर्मा। सिने नगरिमा सर्वाधिक चर्चा हुने जोडीको रुपमा पनि यी दुई रहेका छन्। एकअर्काको नाम जोडेर नै यी दुई सर्वाधिक चर्चामा रहने गर्दछन् । दर्शकले पनि यी दुवैलाई आँप जोडी भनेर स्विकार गरेका छन् । तर यी दुवै भने निरन्तर आफुहरु राम्रो साथी मात्र भएको बताउछन् ।
३. आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्मा
रामकहानी रिलिज पश्चात सवैभन्दा बढी फाइदा कसैलाई भयो भने त्यो हो, आकाश श्रेष्ठ । आकर्षक लुक्सका बीच पनि सिमित दर्शकमा परिचित भएका आकाशको पुजा संग जोडी बाधिए संगै उनको क्रेज निकै राम्रो बन्यो । त्यो सवैको पछिको कारण छिन्, अभिनेत्री पूजा शर्मा। आकाश र पूजालाई दर्शकले जोडीको रुपमा स्विकार गरिसकेका छन् । अझ भनौ आकाशलाई आकु भेना भनेर सम्बोधन गर्न सुरु गरिसकेका छन् । दुवैको प्रेम चर्चाले मिडियामा पनि राम्रो स्थान पाउन थालेको छ । दुवैका हरेक समाचार र अन्तर्वातामा एकअर्काको नाम जोडिएको नै हुन्छ । दुवैका निकट रहेका व्यक्ति पनि यी दुई प्रेममा रहेको चर्चा गर्छन् । तर यी दुवै भने आफुलाई निकै राम्रो साथी मात्र रहेको बताउछन् । तर दुवैको प्रेम चर्चाले नेपाली सिने नगरीमा भने निकै राम्रो स्थान पाउन थालिसकेको छ ।
४. प्रदिप खड्का र जसिता गुरुङ्ग
‘लिलिबिली’ जोडी प्रदिप खड्का र जसिता गुरुङ्ग प्रेममा रहेको चर्चा निकै लामो समयबाट चलिरहेको छ । यी दुवैको जोडी चलचित्र ‘लभ स्टेशन’ मा दोहोरिदैछ । उज्ज्वल घिमिरेको निर्देशनमा तयार भैरहेको चलचित्रमा जसिता प्रदिपका कारण नै जोडिएको चर्चा छ । लिलिबिलि रिलिज लगतै निर्देशक चाम्स संग दुवैको सम्बन्ध चिसिएको थियो । यसको मुख्य कारण प्रदिप र जसिताको अफेयरलाई मानिएको थियो । आम दर्शकले पनि यी दुईलाई जोडीको रुपमा स्विकार गरिसकेको समाजिक संजालमा प्राप्त प्रतिक्रियाबाट सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ । यी दुवै पनि आफुलाई एकअर्काको शुभचिन्तक मात्र रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।